xasan kaahiye – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
May 13, 2017	Leave a comment 153 Views
Ku Dhawaad 400 oo Qoys kana mid ah Qoysaska Danta Yar Ee ku Sugan Degmada Buula Burde Ayaa Maanta ;
May 13, 2017	Leave a comment 156 Views
Dhalinyaro Soomaali ah oo Dalka Mareykanka Laga Soo Musaafuriyay ayaa muqdisho Soo Gaaray Waxayna Tiro ahaan Gaarayaan Ilaa 70 Dhalinyaro ah
May 13, 2017	Leave a comment 115 Views
wararka aan ka Heleyno Magaalada Kismaayo ayaa Sheegaya in Ruux Sitay Jaakad ay ku Xeranyihiin Waxyaabaha Qarxa uu isku Qarxiyay Afaafka Hore Ee Xero Ciidan oo ku Taala Magaalada Kismaayo. Inta la Xaqiijiyay Labo Ruux ayaa ku Geeriyootay Sadex kalana waa ay ku Dhaawac Meeraan Mana Jiraan War ka Soo Baxay Maamulka Jubaland Ee Ka Arimaya kismaayo oo ku Saabsan ...
January 4, 2017	Leave a comment 141 Views
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in meydadka dad ajaaniib ah laga helay xeebta deegaanka Gendershe oo dhanka bari kaga beegan magaalada Marko. Dadka meydadka ah ee laga xelay xeebta deegaanka Gandarshe ayaa loo malaynayaa inay kasoo jeedaan wadamada reer Galbeedka, waxaana jirkooda ka muuqday dhaawacyo loo malaynayo inay sababeen sabeynta biyaha. Warbaahinta Al-shabaab ayaa baahisay in meydadka ay ...
January 4, 2017	Leave a comment 120 Views
Meydad hor leh ayaa laga soo saaray dhismo ku dhow goobihii maalin ka hor ay ka dhaceen Qaraxyadii ay soo abaabuleen Al-shabaab. Dad goob joogayaal ah ayaa inoo sheegay in meydadka laga soo saaray dhismo ku dhow Hotelka Peace oo Qaraxyada ay saameyn ku yeesheen. Meydadka la soo saaray ayaa lagu sheegay Labo Qof oo rayid ah oo mid ka ...
January 4, 2017	Leave a comment 121 Views
Faah faahino dheeraad ah dagaal xalay ka dhacay Bar contarol oo ku yaalo magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Sh/dhexe. Dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa la sheegayaa in kooxo hubeysan oo aan heebtooda la garaneyn weerar ku soo qaadeen kontaroolka laga soo galo magaalada Jowhar ee dhinaca Waqooyi iyadoo halkaa dagaal xoog leh uu ka dhacay. Lama qasaaraha ka ...
Musharraxiinta Mudullood Oo Labo Qodob Ku Heshiiyey
January 4, 2017	Leave a comment 63 Views
Kulan ay yeesheen qaar kamid ah musharraxiinta Madaxweyne ee kasoo jeeda beesha Mudullood ayaa ku heshiiyey Labo qodob oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Musharrax Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Musharrax Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo Musharax C/qaadir Cosoble ayaa falanqeeyay sida Mudullood mar kale ku heli lahayd xilka madaxweyne maadaama maalmahan ay socorey olole mudullood xilkaasi loogu diidan yahay. Waxay isku ...
Halis Kusoo Wajahan Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya Kadib Markii…
January 4, 2017	Leave a comment 85 Views
Waxaa xilligaan laga baqayaa in xaalad halis ay soo wajahdo ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, maadaama laga yaabo in dowladda Burundi ay ciidankeeda kala baxdo dalka. Burundi Madaxweynaheeda ayaa sheegay in ciidankiisa la baxayo, waxayna middaasi halis aad iyo aad u weyn ku tahay ciidamada AMISOM, waayo ciianka Burundi waa kuwa ugu adag ee AMISOM. Ciidamada Burundi ayaa la ...
XOG: Rajada Madaxweyne Ee Cumar C/rashiid Oo Sare u Kacday
January 4, 2017	Leave a comment 44 Views
Musharrax madaxweyne Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa xilligaan aad u qaba rajo ah inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee soo socoda, waxaana jirta codad dheeraad ah oo uu helay. Ilo wareedyo aynu kalsooni ku qabno waxay xaqiijiyeen in Cumar uu codad dheeraad ah ka helay xildhibaanno kasoo jeeda K/galbeed, isaga oo horey u heystay codadka Jubbaland iyo Puntland. Sidoo kale Cumar ...
Dagaal Siyaasadeed Xasan Sheekh Iyo Musharrax Jibriil Oo Meel Culus Gaarey
January 4, 2017	Leave a comment 55 Views
Dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya Musharraxiinta kala ah Xasan Sheekh Maxmauud iyo Jibriil Cabdulle ayaa haatan gaarey meel aad u sarreysa, iyadoo sheekadu ay ka gudubtey halkii ay horey u joogtey. Musharrax Jibriil ayaa billaabay waxa walbo oo lagu cunoqabateynayo Xasan Sheekh, waxaana uu kasoo xirxirey wax walbo oo ku saabsan dhanka dhaqanka. Xasan Sheekh wax kalsooni ah hadda kama haysto ...